क्यान्सरका बिरामीमा देखिन्छ यस्तो मानसिक समस्या | Hamro Doctor News
देशभर ३ सय ३३ जना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत, सबैभन्दा धेरै बागमति प्रदेशमा
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख २७ हजारभन्दा बढी
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १४ सय नाघ्यो
बाजुराको विकट गाउँ अन्द्राडीमा पहिलोपटक स्वास्थ्य सेवा
क्यान्सरका बिरामीमा देखिन्छ यस्तो मानसिक समस्या
By Dr. Namrata Pradhan
क्यान्सर रोग भन्नासाथै अझै पनि धेरै मानिस झस्कन्छन् । उपचार खर्च महंगो, दीर्घकालिन उपचार प्रक्रिया र उपचारको ग्यारेण्टी नहुने हुँदा मानिसहरू यसरी झस्कने गरेका हुन् । यद्यपि, सुरुको अवस्थामै रोगको पहिचान भए बिरामी पूर्ण निको हुन्छ ।
क्यान्सर सरुवा रोग होइन तर यो रोग लागि सकेपछि निको हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसमाथि धेरैजसो क्यान्सरका बिरामी क्यान्सर लागेको तेस्रो वा चौथो चरणमा मात्रै अस्पताल पुग्ने गर्छन । यो समस्या नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा अझै बढी छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा क्यान्सर रोग लागेपछि बिरामीलाई तिरस्कारको दृष्ट्रिले हेर्ने गरिन्छ । यो गलत व्यवहार हो । क्यान्सरलाई कतिपयले पूर्व जन्ममा गरेको पापको फल भन्दै बिरामीको छेउमा समेत नजाने धेरै मानिस छन् । यसले बिरामीलाई थप पीडा पुग्छ । कतिपय बिरामी यही कारण डिप्रेसनमा समेत जाने गरेका छन् । यस्तो व्यवहार देखाउनु हुँदैन । बिरामीको मनोवल बढाउने व्यवहार, सन्तुलित भोजन र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा क्यान्सर रोगबाट उन्मुक्ति मिल्छ ।
क्यान्सरको पहिलो स्टेजमा बिरामी अस्पताल पुगे ८० प्रतिशतलाई निको हुने सम्भावना छ । यस्तै दोस्रो चरणमा ६० र तेस्रोमा ४३ प्रतिशतसम्मलाई निको हुने सम्भावना रहन्छ । तर चौथो चरणमा अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई भने निको हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
क्यान्सर रोगबाट छुट्कारा पाएर पुनः सामान्य जीवनयापन गरिरहेका धेरै उदाहरण छन् । तर बिरामी भएर अस्पताल पुग्दा र परीक्षणका क्रममा क्यान्सर भएको थाहा पाउदा भने अझै बिरामीमा त्रास उत्पन्न भएको पाइन्छ । क्यान्सरका बिरामी आत्मविश्वास सबै भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । आत्मविश्वास नभए उसमा मनोसामाजिक समस्या देखा पर्छ ।
बिरामीमा क्यान्सर लाग्यो भन्ने बितिकै कति बाँचिने हो अब म मरिहाल्छु भन्ने जस्ता सोच आउन थाल्छ । कतिपय बिरामीमा क्यान्सर उपचारमा लाग्ने खर्चले पनि पिरोल्ने गरेको छ । उपचार गर्दा कति खर्च लाग्ने हो ? खर्च गरेर पनि ठिक भएन भने के गर्ने ? खर्च कसरी जुटाउने ? जस्ता कुराले बिरामी डिप्रसनमा जाने गर्छ ।
क्यान्सरका बिरामीमा देखिने मानसिक समस्या
कतिपय बिरामीले सुरुमा क्यान्सर लागेको नै स्वीकार गर्न सक्दैनन् । के कता गल्ती भयो होला भन्ने गर्छन । पत्याउनै गाह्रो हुनेगर्छ । जब क्यान्सर भन्ने थाहा हुन्छ तब मर्छु की भन्ने डर उत्पन्न हुन्छ । त्यसपछि उपचार खर्च कसरी जोहो गर्ने ? भन्ने कुराले सताउन थाल्छ ।
बिरामीलाई रोगबारे सुनाउने डाक्टर, घरका सदस्यसाथि रिस गर्न थाल्छ । रिसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन भने एन्जाइटी हुन्छ । र यो एन्जाइटि बढ्दै गए डिप्रेसन हुन्छ । बिरामीलाई जीवन बेकार लाग्न थाल्छ । दिनमा निन्द्रा लाग्ने रातमा नलाग्ने, रुन मन लाग्ने, बिस्तारै आत्महत्याको भावना आउन थाल्छ र छिटै मर्न मन लाग्न थाल्छ ।
यदि बिरामी एन्जाइटीमा छ भने स्वा...स्वा... गर्ने, पसिना आउन थाल्ने, दिक्क महशुस गर्न थाल्छ । साथै उपचार राम्रो भएन की, यो उपचार गराउने राम्रो ठाउँ होइन की, डाक्टर राम्रो होइन की भनेर सबैमाथि शंका गर्न थाल्छ । बिरामीले औषधि खान मन गर्दैन । व्यथाका कारण हुने दुखाइ र उपचारका क्रममा हुने समस्या बाहेक वाकवाकी आउने, कपाल झर्ने, दुब्लाउने हुन्छ । यसले बिरामीमा थप निराशा बढ्छ ।
क्यान्सरका बिरामी अस्पतालमा भएका बेला भेट्न धेरै मान्छे आउँछन् तर बोल्न डराउछन् । यसले पनि बिरामीमा असर गर्छ । मसँग कोहि बोल्न मान्दैनन सबै परपर हुन्छन् भन्ने भावना उसमा आउछ । कतिपय बिरामीले आफुले के गर्दैछु भन्ने समेत थाहा नपाउने हुन्छ । साथै घरबाट बाहिर निस्कने, कहिलेकाही २–४ दिनसम्म बाहिरै बस्ने समेत गर्न थाल्छ । प्रायजसो बिरामी डिपे्रसन भइसकेको अवस्थामा डाक्टर कहाँ पुग्छन् । यस अवस्थामा क्यान्सर र डिप्रेसन दुबैको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा उपचारमा जटिलता देखिन्छ । यसकारण नेपाल क्यान्सर अस्पतालले क्यान्सरका बिरामीमा मानसिक अवस्था देखा पर्ने बितिकै मनोविद् कहाँ पठाइने गरेको छ । सुरुमा बिरामीलाई कस्तो कुराले सताएको छ त्यो बुझिन्छ । सोही अनुसार उपचार प्रक्रिया सुरु हुन्छ । बिरामीमा देखा परेको मानसिक अवस्थालाई थेरापीमार्फत व्यवस्थापन गर्न सिकाइन्छ । थेरापीमार्फत नभए समस्या अनुसार औषधि चलाइन्छ । तर थेरापीमार्फत नै मानसिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न जोड दिइन्छ । जसमा औषधिको प्रयोग हँुदैन ।
क्यान्सरका बिरामीमा देखा पर्ने मानसिक समस्याको समाधानका लागि जति उपचारको आवश्यक छ त्यति नै आफन्त र परिवारको सकारात्मक व्यवहारको आवश्यकता पर्छ । बिरामीलाई सधैं हौसला दिइरहनु पर्छ । मनोबल गिर्न दिनु भएन । त्यसैले यस्तो अवस्था देखा परेमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
(डा. प्रधानसँगको कुराकानीमा आधारित ।)
Last modified on 2019-11-08 12:32:03
Samples Tested - १७,००,०००